Dadyowga Afrika ka soo jeeda oo badanaaba falal nacayb lagu la kaco - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadyowga Afrika ka soo jeeda oo badanaaba falal nacayb lagu la kaco
La cusbooneeyay måndag 3 februari 2014 kl 13.11
La daabacay måndag 3 februari 2014 kl 10.22
Daraasad maanta la soo ban-dhigey ayaa lagu caddeeyey in dadyoowga ka soo jeeda asal ahaan qaaradda Afrika ama leh midabka madow ey yihiin dadyoowga ey la soo gudboonaadaan faqooqa ugu ballaaran ee dalkan ka dhaca.
Sida laga soo xigtay sannadkii 2012 oo tira-koob ahaan lagu soo gudbiyey in la galey tiro 4 000 gaarsii-san ee la xiriira falalka-dembiyeedyada naceeybka iyo faqooqa ayay ku caddeeyd in 17% lagula kacey dadyoowga jirkoodu madowga yahay. Qoowmiyadda soomaalida ee dalkan ku dhaqan, ahna kooxda ugu tirada badan dadyoowga ee ka soo jeedda qaaradda Afrika ayaa ka mid ah dadyoowga ey la soo gudboonaato cunsuriyaddu.
Mursal Ismaaciil Ciise, wuxuu ka mid yahay soomaalida ku dhaqan magaalada Borlänge, isla-markaana sida aadka ah uga qeyb qaata dhaqdhaqaaqa howlaha bulshada. Mursal Ciise ayaa sheegay mar aannu khadka telefoonka kula xiriirney iney jiraan laba ee faqooq ah:
Faqooqa Soomaaliya ka jiray wuu ka darraa midkan